Efa Ho Roa Volana Izao No Nitokona Ny Dokotera Ao Kenya · Global Voices teny Malagasy
Efa Ho Roa Volana Izao No Nitokona Ny Dokotera Ao Kenya
Voadika ny 07 Febroary 2017 6:05 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, русский, polski, Español, English
Renim-pianakaviana milahatra hitsabo tena ao amin'ny Hopitaly Distrikan'i Sindo, Nyanza, Kenya, tamin'ny taona 2008. Sary nozaraina teo ambanin'ny CC BY-NC-ND 2.0, avy amin'ny Departemantan'ny Fampandrosoana Iraisampirenena avy amin'ny Fanjakana Mitambatra (UK) .
Tamin'ny Desambra 2016, dokotera Kenyana miisa 5.000 avy amin'ny hopitalim-panjakana rehetra manerana ny firenena no nitokona mba hanohitra ny tsy fahombiazan'ny fanjakana Kenyana nametraka ny fifanekena fifampiraharahana iombonana (CBA) izay nifanekeny tamin'ireo dokotera tamin'ny alalan'ny sendikan'izy ireo tamin'ny taona 2013.
Herinandro maro taty aoriana, mbola mitokona ny dokotera ary tsy mbola tapitra ny fijoroana ivelan'ny toeram-piasana.
Nampiato ny rafi-pitsaboana ho an'ny vahoaka ny fitokonana. Ohatra, voalaza fa marary maherin'ny 100 no nandositra ny hopitaly psykiatrika (mitsabo ny areti-tsaina) tao Nairobi rehefa nanomboka ny fitokonana ary noterena hanampy vehivavy iray hiteraka ny mpiambina tao amin'ny hopitaly ao andrefan'i Kenya.
Niantso ireo mpikambana ao aminy mba tsy hiasa ny Sendikàn'ny Mpitsabo, ny Mpiasan'ny Farmasia sy ny Mpitsabo Nify ao Kenya (KMPDU), sampana sendikaly mifehy ny dokotera Kenyana ho setrin'ny tsy fanatanterahan'ny fanjakana ny fifanekeny ao anatin'ny toe-javatra miharatsy eny amin'ny toeram-pitsaboam-bahoaka.
Nikatona ny Hopitalim-pirenena sady fitaratra no fampianarana ao Kenyatta sy Moi. Tsy maintsy manatanteraka ny fifanekena CBA nosoniavin'izy ireo tamin'ny taona 2013 ny governemantan'i Kenya.
Natao sonia tamin'ny 23 Jiona 2013 ny fifanekem-piarahamiasa eo amin'ny fanjakana Kenyana amin'ny alalan'ny ministeran'ny Fahasalamana sy ny sendikàn'ny dokotera. Natao hanarenana ny rafi-pitsaboana ao anatin'ny fepetra fadiranovana ao amin'ny firenena izany. Tsy manana fitaovam-pitsaboana sy fanafody fototra ny ankamaroan'ny hopitalim-panjakana, ary diso be asa misahana mponina Kenyana miisa 43 tapitrisa ny dokotera miisa 5 000.
Araka ny tatitry ny taona 2014 momba ny fandrosoan'ny olombeloana avy amin'ny Firenena Mikambana, niakatra ara-potoana ny fidiram-bolan'ireo mpanankarena indrindra mandrafitra ny 20%-n'ny mponina Kenyana tao anatin'ny taom-polo iray, izany hoe in-11 avo heny noho ny vola niditra tamin'ny 20%n'ny mahantra indrindra, ka mahatonga an'i Kenya ahitana hantsana faharoa lalina indrindra eo anivon'ny fiarahamonina ao Afrika Atsinanana aorian'i Rwanda. Na dia misy aza ireo hopitaly tsy miankina, tsy takatry ny fahefa-mividin'ny ankamaroan'ny Kenyana izany.
Zara raha notaterin'ny fampahalalam-baovao ao Kenya ny fitokonana mitohy sy ny volazan'ny fifanekena CBA, maro ireo milaza fa hiasa ny dokotera rehefa ampiakarina 300% ny karaman'izy ireo. Na dia izany aza, tsy izany ihany no zavatra voalaza ao amin'y CBA, milaza hanarina ny rafi-pahasalamam-bahoaka amin'ny alalan'ny fampitaovana ireo hopitalim-panjakana rehetra ny CBA, ary hanome rafi-pitsaboana mora hoan'ny daholobe. Manomboka amin'ny karama 400 dolara Amerikana isam-bolana ny ankamaroan'ny dokotera. Mbola ambany ny isan'ny dokotera miohatra amin'ny isan'ny marary izay 18: 100.000.
Tamin'ny sioka nozaraina tamin'ny nanombohan'ny fitokonana, nizara sary mampiseho ny CBA amin'ny fomba mora ahatakarana azy, hitantarana sy hizaran'ny Kenyana azy bebe kokoa ny KMPDU.
13. Ny CBA no hanavotra indray ny rafi-pitsaboana ao amin'ity firenena ity satria ho an'ny tombontsoan'ny Kenyana rehetra ao anatiny izany
Noho ity fomba fijery diso ny zava-misy sy ny ezaky ny fanjakana ary ny fampahalalam-baovao sasany ity no antony nahatonga ny sendikà nanomboka ny hetsika goavana amin'ny media sosialy mba hanentanana ny Kenyana manoloana ny toe-javatra ankehitriny eo amin'ny rafi-pitsaboana ao amin'ny firenena ary koa mba hahazoana ny fanohanan'ny Kenyana.
Manana adidy ara-pitondrantena ny trano fampahalalam-baovao rehetra mba hanasongadina ny tsy manjò, tsy ny marary ihany fa koa ny dokotera koa
Tamin'ny fampiasana ny famantarana azy ireo ao amin'ny Twitter @KMPDU, efa ho roa volana izay ny sendikà no nizara sary torohay, sary-sy-soratra, saripika, sariitatra, lahatsary sy tantara avy amin'ireo mpikambana ao amin'ny sendikan'izy ireo izay mitantara ny zava-niainan'izy ireo manokana miezaka mamelona marary tsy misy fitaovam-pitsaboana, tsy misy fanafody sy herinaratra ary ny asa tafahoatra mahazo ny dokotera maro izay tsy maintsy miasa 36 ora, ary zara raha miala sasatra.
Tamin'ny fanazavana an-tsary nangonon'ny tranonkala Courageous Stories, namaritra ny fomba fijeren'izy ireo ny marary mamoy ny ainy ny dokotera iray satria nomena ny mpanao politika ao an-toerana mba hakana voatabia eny an-tsena ny fiara mpitondra marary an'ny hopitaly .
Nahitana tenirohy 12 ny fanentanan'ny sendikà tao amin'ny media sosialy hatramin'ny nanombohan'ny fitokonana: #LipaKamatender (aloavy tahaka ny andoavanao ny mpampitrosa), #ImplementCBA, #DoctorsOnTrial, #DoctorsStrike, #doctorsarehumanstoo, #CBAismorethancash, #offernotCBA, #HealthCrisisKe, #CBAforKenyans, #healthontrial, #SickAt50, #iamatribelessdoctor.
51 andro izay! Ahoana no nahatonga anay hahatratra izany? Mendrika sy mitaky ny hahazo rafi-pitsaboana tsara kokoa isika! Izay ihany!
Notoherin'ny fanjakana ny fitakian'ireo dokotera. Tamin'ny antsafa mivantana tao amin'ny fahitalavim-pirenena tamin'ny volana Desambra, nilaza ny mpitondratenin'ny governemanta Eric Kiraithe fa tsy mila dokotera i Kenya ary nikasa hanafatra dokotera avy any India sy Kiobà ny fanjakana.
Herinandro vitsy taorian'ny fanambarana, nitatitra ny gazety Indiana, Telegraph fa nolavin'ny praiminisitra Indiana ny fangatahana hanoloana ireo dokotera Kenyana mpitokona ho dokotera Indiana nandritra ny fitsidihan'ny filoha Kenyana tao New Delhi.
Mandritra izany fotoana izany, miato ny rafi-pahasalamam-bahoaka ao amin'ny firenena.